काठमाडौंमा अलपत्र परेका धनकुटा नगरवासीलाई धनकुटा ल्याईयो – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
काठमाडौंमा अलपत्र परेका धनकुटा नगरवासीलाई धनकुटा ल्याईयो
२०७७, १७ बैशाख बुधबार २१:५४
धनकुटा । कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेका १ सय ५ जना धनकुटा नगरवासीलाई गृहनगर ल्याइएको छ । धनकुटा नगरपालिकाको व्यवस्थापन तथा धनकुटा काठमाडौं कोरोना विपद् सहयोग समितिको समन्वयमा उनीहरुलाई गृहनगर ल्याइएको हो । यसरी ल्याईएकोमा पहिलो प्राथमिकतामा उपचार गर्न गएका, मजदुर, विद्यार्थी तथा खर्च अभाव भएकाहरु रहेको समितिका संयोजक तथा संविधानसभा सदस्य हेमराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसरी आएकाहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य निरन राई, धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङ, उपप्रमुख सकुन्तला बस्नेत, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष जंगबहादुर राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापालगायतले बसपर्कामा स्वागत गरेका थिए । यसरी गृहजिल्ला जान चाहनेहरु अझ साढे पाँचसय जति रहेको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए । उनले सरकारले अहिले कडाई गरेका कारण थपलाई धनकुटा पठाउन नसकिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले अनुमति दिनासाथ साढे पाँचसय जनालाई नै धनकुटा पठाईने जानकारी दिए ।
यसरी आएकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा घरमै क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका छन् । उनीहरु होम क्वारेन्टाईनमा बसे नबसेको हरेक वडामा गठित कोभिड नियन्त्रण समिति र स्वास्थ्यकर्र्मीहरुले निगरानी गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबादुर थापाले जानकारी दिए । उनीहरुको भेडेटारस्थित हेल्थ डेक्सले ज्वरो आए नआएको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङले थपलाई ल्याउन काठमाडौं पठाएको बस इटहरीबाट फर्काई दिएको जानकारी दिए । उनले नगरवासीलाई कुनैपनि प्रकारको समस्या हुन नदिन नगरपालिका सचेत रहेको जानकारी दिए ।
यसरी आएकाहरु घरघरमै क्वारेन्टाईनमा बस्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भनि केहिले विरोध जनाएको छ । उनीहरुलाई नगरपालिकाले तयार गरेको औद्योगिक ग्रामस्थित क्वारेन्टाईनमा राखिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुकाअनुसार आफुहरु यति लामो दिनदेखि होम क्वारेन्टाईनमा बसिरहेको तर यसरी विना स्वास्थ्य परिक्षण आएकाहरुले कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलाउन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ भनि प्रश्न गरे । यदि आएकाहरुमा कोहि एकजनालाई मात्र कोरोनाको स.क्रमण छ भने आएकाहरु अन्यहरुको अवस्था के हुन्छ ? भनि प्रश्न गरे । त्यसैले आउन चाहनेहरुको स्वास्थ्य परिक्षण काठमाडौंमा नै गरेर ल्याउने व्यवस्था गर्न आग्रहगरेका छन् ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्री ढुवानीलाई पास नचाहिने
सूर्यबहादुर थापा प्रतिष्ठानद्वारा राहत सामग्री हस्तान्तरण